Candy Crush Friends Saga hanafaka ny biby amin'ny match-3 | Androidsis
King dia nitifitra ny tenany tamin'ny fahombiazany tamin'ny lalao finday niaraka tamin'ny Candy Crush Saga. Miverena indray izao indray hanome antsika vatomamy sy vatomamy bebe kokoa miaraka amin'ireo sakaizany Candy Crush. Amin'ity indray mitoraka ity, amin'ny alàlan'ny fitambarana vatomamy, tsy maintsy manafaka ny sakaizanao biby isika.
Fialantsiny iray hafa hitondra anay atiny vaovao mifandraika amin'ny iray amin'ireo sagasy malaza indrindra amin'ny fitaovana finday. Ireo Candy Crush Saga dia mpilalao nandritra ny taranaka maro, na ny renibenay na ny zandriny indrindra amin'ny fianakaviana. ankehitriny avereno izay mamy rehetra miaraka amin'ny vatomamy, fahafinaretana ary loko maro kokoa.
1 Tsy mamorona ny kodiarana fa manome atiny bebe kokoa
2 Miaraka amin'ny fomba samihafa amin'ny Candy Crush Friends
3 Mamy ho an'ny rehetra
Tsy mamorona ny kodiarana fa manome atiny bebe kokoa
Ary indray King dia tsy mitondra zava-baovao ho antsika, fa famerenana ilay zavatra nitovy fahombiazana taminy. Ary tsara ny ataon'izy ireo, satria ny endrik'izy ireo amin'ny vatomamy, ny fitambarana ary ny fandokoana mba hizara nefa tsy miato dia mandeha tsara.
Raha ny marina, tsy misy hafa tsy maintsy jerenao ny isan'ny hevitra voarainao tao anatin'ny herinandro vitsivitsy taorian'ny namoahana ity lohateny vaovao amin'ny saga ity. Ary io fomban-kevitra io dia arahin'ny mpilalao an-tapitrisany eran'izao tontolo izao ary miandry fatratra ny atiny vaovao miaraka amina ambaratonga an-jatony maro izy ireo. Satria ny iray amin'ireo Maximan'ny Candy Crush Friends dia ny mameno ny ambaratonga rehetra miandry.
Manana lohateny vitsivitsy izahay, toy ilay misy diamondra, sy ny maro hafa ho avy. Ao amin'ny Candy Crush Friends ny lohahevitra lehibe dia ny biby ary hanana ny tanjonao ianao hitady azy ireo hamonjy azy ireo. Raha ny marina, amin'ny maro amin'ireo match-3s izay hataonao dia mila miasa mafy ianao amin'ny fampifangaroana trondro sy biby hafa hahazoana valisoa tsaratsara kokoa ary ny efijery dia feno loko miloko amin'ireo vokatra maro loko ireo.
Miaraka amin'ny fomba samihafa amin'ny Candy Crush Friends
Tsy misy tsy fahampian'ny fomba lalao samihafa hanomezana sakafo ny fotoana lalao ary maharitra herinandro maro ianao vao vita ity Candy Crush Friends vaovao ity. Ny maody toa atsobohy ao anaty sôkôla ny cookie na afaho ny horita sy ny mammoth. Izy rehetra dia natsipy tamina fomba fijery mahafinaritra iray izay namboarina tamim-pahakingana ary koa mavitrika ireo mpilalao. Io no teboka iray hafa izay mahavita manandratra ny traikefa filalaovana izay anaram-boninahitra King vaovao mihitsy.
Raha ny momba ny mekanika lalao, dia miankina amin'ny fotony manambatra voankazo mitovy loko amin'ny làlana samihafa. Raha afaka manambatra ny biby amin'ny alàlan'ireo tic-tac-toe na mihoatra isika, valisoa tsara kokoa, teboka maro ary ireo vokany jirofo rehetra tianay ho hita amin'ny finday misy efijery lehibe; Inona The Galaxy Note 9 na ireo vaovao avy any Huawei.
Mamy ho an'ny rehetra
Eo ihany koa ny boky sticker ovay ny akanjon'ny namanao, jereo ny fomba fandihizan'ny Yeti na koa ilay fifampikasohana marobe ahafahanao manaikitra amin'ny fianakavianao sy ny namanao ao amin'ny Facebook.
King indray dia mitondra fanavaozana lehibe ho antsika amin'ny endriny fahombiazana izay ananany. Fahafinaretana hita maso sy jaky ho an'ny efijery finday misy anao izay tsy misy tsy fahampian'ny vokatra azo amin'ny endrika isan-karazany, indrindra rehefa manao fitambarana mahafinaritra ianao, sy ireo olona manana endrika kanto ary afaka manao cajole amin'ireo sary mihetsika ireo dia tanterahina tsara. Raha ara-teknika dia mandresy isa maromaro ny Candy Crush Friends Saga ho tonga ohatra amin'ny tokony hatao raha te handefa ankamantatra izay tratran'ny be sy ny maro.
Mazava be izany Candy Crush Friends Saga dia lalao ho an'ny hardcore sy ho an'ireo fa tian'izy ireo ny andavanandron'ireo izay manipy lalao haingana ianao mba hanalana ilay sakanana. Manana izany maimaim-poana ianao ao amin'ny "freemium" avy amin'ny Google Play Store haka fanahy anao ary hiroso amin'ny micropayments. Na izany na tsy izany, afaka mankafy azy ianao nefa tsy mandany denaria.
Sintoma Kavina Saga
Votoaty vaovao marobe
Bebe kokoa noho izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Candy hafa avy amin'ny King miaraka amin'ny Candy Crush Friends Saga
Ny famolavolana ny Samsung Galaxy S10 dia saika vita
Google Assistant dia tsy ho tonga amin'ny mpandahateny Sonos raha tsy amin'ny taona 2019